Bogga ugu weyn Lacag intee le'eg ayay tahay inaan sameeyo: Istaraatiijiyadda Maaliyadeed ee Shaqsiga ee 2022
Meel kasta oo aad ka shaqaynayso iyo muddada aad shaqaynaysay, waxaad u baahan tahay inaad isweydiiso, “Immisa lacag ah ayaan samaynayaa?”
Lahaanshaha istaraatijiyad maaliyadeed shaqsiyeed waa waajib in la raaco. In kasta oo ay jiri karaan tilmaamo iyo tilmaamo la raaco, codsiga iyo dheefta dhammaadku waa shakhsi.
Ka dib burburkii dhaqaale iyo hubsiimo la’aan, fikradda ah in la urursado lacag inta aad awooddo waa run sida ay noqon karto. Si kastaba ha noqotee, maqaalkan, waxaan ka fikiri doonaa inta ay tahay inaad sameyso.
Intee in le'eg ayay tahay inaan sameeyo?
Haddii qofna uusan ka hadlin inta ay tahay inaad sameysid, xaggee ayaad damacsan tahay inaad ka bilowdo?
Si loo go'aamiyo qiimahaaga lacageed, waxaad u baahan tahay inaad sameyso waxyaabaha soo socda:
#1 Ogow qiimahaaga shaqsiyeed
Si aad u ogaato qiimahaaga shaqsiyeed, waxaad u baahan tahay inaad qiimeyso asalkaaga shaqsiyeed iyo doorbidyadaada. Waqtigan xaadirka ah, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso heerkaaga waxbarasho, shuruudaha shaqada, xirfadaha, iyo goobta.
Markaad ururiso macluumaadkan khuseeya, hadda waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso heerka nolosha, mushaharkaaga suurtogalka ah, iyo hab -nololeedkaaga.
Xusuusnow inaad sidoo kale ku darto dheefaha laga yaabo inaad u baahato sida caymiska caafimaadka ama barnaamijka kaalmada amaahda ardayga. Waxaas oo dhami waxay ku caawin doonaan marka aad bilowdo inaad baaris ku samayso isbarbardhigga shaqada iyo fursadaha.
#2 Cilmi -baarista Mushaaraadka caadiga ah
Ka dib markaad eegto qiyamkaaga shaqsiyeed iyo baahiyahaaga, u qaad raadintaada internetka. Waxaa jira dhowr degel oo xisaabin kara mushaharka, marka helida mid ku habboon waxaad raadineyso waa muhiim. Tan waxaa lagu samayn karaa Glassdoor, PayScale, Wax ku baro mihnadda, mushaharka LinkedIn, iyo qaar kaloo badan.
#3 Fursadaha Miisaanka
Markaad dhammaysato baadhitaanka mushaharka, fiiri fursadahaaga oo isbarbar dhig mushaharka kala duwan si aad u doorato midka ku habboon hab -nololeedkaaga.
Maxaa Go'aamiya Mushaharkayga?
Go'aaminta falsafadda magdhowga, arrimo badan ayaa soo gala, oo ay ku jiraan waxqabadka ururka, qorshayaashiisa mustaqbalka, helitaanka kartida, muhiimadda doorka, sumcadda ururka, juqraafiga, barkadda kartida, khibradda iyo waxbarashada, waxqabad, iwm.
Tusaale ahaan, haddii ururku uusan qorshayn inuu koro, waxaa laga yaabaa inuusan doonayn inuu bixiyo dhamaadka sare ee xaddiga mushaharka door, si kastaba ha ahaatee, haddii ururku u baahan yahay inuu shaqaaleeyo door muhiim u ah marxaladdiisa kobaca/hoos u dhaca , waxaa laga yaabaa inay diyaar u tahay inay bixiso qiime sare oo ah tayada saxda ah.
Faa'iidooyinka iyo mushaharka doorsoomaha waa qaybaha kale ee ay ururadu la shaqeeyaan si loo helo wadarta magdhowga ilaa heerka la rabo.
EEG sida loo bilaabo meherad kulliyadda kadib
Intee In La Badbaadiyaa Bil Kasta?
Ilo badan ayaa ku taliya in la keydiyo 20% dakhligaaga bil kasta.
Sida laga soo xigtay dadka caanka ah 50/30/20 xeer, 50% miisaaniyaddaadu waa inay ahaataa waxyaabaha daruuriga ah sida kirada iyo cuntada, 30% kharash ku -talo -gal ah, iyo ugu yaraan 20% kaydka. (Amaahda qaanuunka 50/30/20 waxaa iska leh Senator Elizabeth Warren, oo sida la sheegay wax bari jirtay markay ahayd borofisar kicitaan.)
Waxaan ku raacsanahay soo jeedinta in la keydiyo 20% dakhligaaga billaha ah. Laakiin had iyo jeer ma fududa in la soo jeediyo boqolleyda saxda ah ee dakhliga si aad u keydiso. Xaaladaha qaarkood, u oggolow dakhligaaga, yoolalka maaliyadeed, iyo istaraatiijiyadda maaliyadeed ee shaqsiyeed.
Haddii aad tahay qof dakhli sare leh, waxaad caqli yeelan lahayd inaad kharashyadaada hoos u dhigto oo aad kaydiso boqolkiiba aad u badan dakhligaaga.
Dhinaca kale, haddii badbaadinta 20% ee dakhligaagu ay u muuqato mid aan macquul ahayn, ama xitaa aan suurtogal ahayn xilligan, ha niyad jabin. Wax badbaadin ayaa ka fiican wax aan jirin.
Si aad u gaarto nolol maaliyadeed oo xasilloon, waxaad u baahan tahay istaraatijiyad maaliyadeed oo shaqsiyeed.
LA XIDHIIDH BADAN: Imisa Jeegaaga Mushaharka ah ayay tahay inaad isla markiiba keydiso?
Waa Maxay Istaraatiijiyadda Maaliyadda Shaqsiga?
Maaliyadda shaqsiyeed waa erey daboolaya maareynta lacagtaada sidoo kale badbaadinta iyo maalgashado. Waxay ka kooban tahay miisaaniyadda, bangiyada, caymiska, amaahda guryaha, maalgashiga, qorsheynta howlgabnimada, iyo canshuurta iyo qorsheynta guryaha.
Ereyga wuxuu inta badan tilmaamayaa dhammaan warshadaha bixiya adeegyada maaliyadeed ee shakhsiyaadka iyo qoysaska wuxuuna kala taliyaa fursadaha maaliyadeed iyo maalgashi.
Istaraatiijiyada maaliyadeed ee shaqsiyeed waxay xuduud la leedahay in lagu gaaro hadafyadaada maaliyadeed, ha ahaato mid keydsan inaad iibsato baabuur, u kaydsato kulliyad.
Si aad uga faa'iidaysato dakhligaaga iyo kaydkaaga, waxaad u baahan tahay inaad noqoto qof aqoon u leh maaliyadda.
Maxaan ugu Baahanahay Istaraatiijiyad Maaliyadeed Shakhsiyeed?
Waxaad u baahan tahay istaraatijiyad maaliyadeed shaqsiyeed si aad u gaarto yoolalkaaga. Aqoonta iyo adeegsiga xeeladaha waxay abuuraan waddo waxayna ku siinayaan faham qoto dheer oo ah yoolalkaaga maaliyadeed ee dhow iyo kan fog.
Hadda waad fahantay sababta aad ugu baahan tahay istiraatiijiyad maaliyadeed shaqsiyeed, halkan waa sida loogu dhejiyo istiraatiijiyadda maaliyadeed ee shaqsiyeed.
Sida Loo Adkeysto Istaraatiijiyada Maaliyadeed Ee Shaqsiga
Halkan waxaa ah 8 tallaabo oo aasaasi ah oo kaa caawinaya inaad ku dhegto istiraatiijiyad maaliyadeed shaqsiyeed:
#1 Abuur miisaaniyad
Abuuritaanka miisaaniyad ayaa kaa caawin doonta inaad qeexdo baahiyahaaga asaasiga ah oo aad u toosiso siday u kala horreeyaan.
Abuuritaanka iyo ku -dheganaanta miisaaniyaddu waxay u ekaan kartaa mid adag in la gaaro marka hore laakiin runtii waa wax -tar leh. Miisaaniyaddu waxay kaa caawineysaa inaad si cad u aragto oo aad u fahamto xaaladdaada maaliyadeed.
#2 Faham kharashaadkaaga
Fahmidda kharashaadkaaga waxay la xiriirtaa inaad yeelato aqoon fiican oo ku saabsan dakhligaaga iyo inaad ogaato sida ay u baaba'do adigoo taxay liiska.
Waxaad la socon kartaa kharashaadkaaga adigoo haya rasiidhadaada oo fiiriya bayaannada bangigaaga.
Ogaanshaha sida lacagtu u baxdo waxay ku siin doontaa sawir cad oo ku saabsan sida loo maareeyo kharashaadkaaga waqtiyada soo socda.
#3 Fahamka dakhligaaga
Markaad fahanto dakhligaaga, waxaad awoodi doontaa inaad si taxaddar leh u miisaanto oo aad si sax ah ugu qoondeyso miisaaniyadda.
Haysashada sawir cad oo ku saabsan dakhligaaga iyo sida uu ula jaanqaado kharashaadkaaga ayaa kaa caawinaysa inaad fahanto sida ugu wanaagsan ee loo maareeyo lacagtaada.
#4 Isku dar deyntaada
Inkastoo qofna uusan jeclayn deymaha, haddana dhibcaha ayaa badanaa u yimaada inay badbaadiyaan maalinta. Waxa ugu horreeya ee la sameeyo marka dayn lagugu yeesho waa inaad ka shaqayso sidii looga takhalusi lahaa. Haddii aad leedahay deymaha kaarka deynta, deymaha amaahda ardayga, iyo deymo kale, fiiri isku -darka oo isku day intii suurtogal ah si aad u hesho heerka ugu hooseeya ee la gaari karo.
Waxaa jira ikhtiyaarro halkaas ka jira oo kuu oggolaanaya inaad isku darto dhowr deyn oo aan la hubin sida kaararka deynta, amaahda shaqsiyeed, iyo amaahda mushahar bixinta, hal biil halkii aad si gooni ah u bixin lahayd.
Haddii aad leedahay hal deyn oo kaarka deynta ah oo aad ku jirto miisaaniyad adag, isku day inaad bixiso ugu yaraan qaddarka ugu yar isla marka aad hesho credit card biil. Markaa, haddii dhaqaalahaagu oggolaado, oo aad la kulanto xoogaa lacag ah, isku day inaad bixiso isla lacagtii dhawr toddobaad kadib.
Iskuday inaad sii wadato wareegga lacag -bixintaan ilaa deyntaada si buuxda loo bixiyo.
ARAG SIDOO KALE: 17 Fikrado Qurux Badan oo Lagu Bixin Karo Deynta Si ka dhakhso badan sidii hore
#5 Iska yaree kharashyada aan loo baahnayn
Haddii aad taageere weyn u tahay wax kasta oo raaxo leh ama aad ku raaxaysato bixinta adeegyada waxaad sidoo kale ka heli kartaa gurigaaga, isku day oo ka fikir inaad yarayso kharashyada.
Istaraatiijiyadani waa mid ku jaangooya dakhligaaga iyo kharashaadkaaga oo hubiya in kharashku aanu dhaafin dakhliga.
Markaad yarayso kharashyada aan loo baahnayn, kaydkaagu wuu kordhaa oo waxaad yeelan doontaa wax badan lacag maalgashi.
#6 Abuur sanduuq degdeg ah
Abuuritaanka sanduuqa gurmadka deg -degga ah ayaa ku nooleynaya oo kuu diyaarinaya waqtiyo aan la aqoon. Caadada lahaanshaha sanduuqa gurmadka waa istaraatijiyad maaliyadeed shaqsiyeed oo caafimaad leh oo kaa caawineysa inaad sabaynayso.
Tusaale ahaan, marka baabuurkaaga si shil ah u jabo, sanduuqaaga gurmadka waxaa loogu tala galay in lagu daboolo kharashyada ee ma aha kaydkaaga, amaahda, ama wax kasta.
#7 Keydso hawlgabka
Kaydinta hawlgabka waa abaalmarinta ugu fiican ee aad naftaada siin karto. In kasta oo waqtiyadu yimaadaan oo tagaan, xilliyadu sidoo kale way dhammaadaan. Markaad shaqada bilowdo, waxay noqon doontaa dantaada ugu fiican inaad ka saarto 10-15% dakhligaaga hawlgabka.
Haysashada wax u kaydsan hawlgabku waxay ku siin doontaa xoogaa lacag caddaan ah si aad u xajisid marka timaha cad iyo dhabarta cuncunku bilaabaan inay yimaadaan.
LA XIDHIIDH BADAN: Sida Looga Hawlgaliyo 50 -ka Milyaneer ahaan! Riyooyinka Hawlgabka
#8 Adeegso aalad maaliyadeed shaqsiyeed
Maareynta maaliyaddaada adiga laftaadu farahaaga waa mid daal badan oo aan sii socon karin. Adigoo adeegsanaya aaladaha maaliyadeed ee shaqsiyeed, waxaad si otomaatig ah ula socon kartaa dakhligaaga, kharashaadkaaga, maalgelinta oo xitaa abuura miisaaniyad.
Intee in le'eg ayaan samaynayaa? Sida Looga Gorgortamo Dakhligaaga?
Mushaharku sida caadiga ah waa waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ka gorgortamto marka ay kula soo gudboonaato fursad shaqo. Taasi waxay u egtahay waali, sax?
Si kasta oo ay ahayd markii ugu dambaysay ee aad ka gorgortamaysay mushahar ka wanaagsan, wakhtigu wuu soo noqon doonaa marka qiimaha shaqada aad qabato aanu ka muuqan magdhowga aad ka hesho shaqadaas.
Marka wakhtigan la gaadho, waxaa muhiim ah in arrinta si dhab ah loo wajaho, loo dhiso kiis caddayn ku salaysan oo ku saabsan mushaharka aad rabto iyo ka gorgortan mushaharkan.
Miiska wada xaajoodka, inta ay tahay inaad fahanto dakhliga shirkadda, siyaasadaha ama qaabka ganacsiga, ujeedadu waa inaad miiska ka tagto waxa adiga kuu fiican. Marka laga gorgortamayo inta ay tahay inaad samayso, waxaad u baahan tahay inaad u diyaar garowdo;
Dhis kiiskaaga: Waxaad u baahan doontaa inaad caddeyso inaad mudan tahay inaad maalgashato, tusaalooyin gaar ah oo ku saabsan qiimaha aad siisay loo -shaqeeyayaasha xirfaddaada.
Waji xoogaa iska caabin ah.
Samee Dheelitir u Dhexeeya Shirkad iyo Dabacsanaan: Wada xaajoodkaaga mushaharku si fiican uma hagaagi doono haddii aad diido in aad wax sheegto ama aad tidhaa “haa” si loo kordhiyo mushaharka ugu yar. Diyaar u noqo inaad hore iyo dib ugu baxdo inta lagu jiro wada xaajoodka oo hubso in tanaasul kasta oo la gaaro la aqbali karo.
Intee in le'eg ayaan ku samaynayaa 30 jir?
Sida laga soo xigtay SmartAsset, dadka Mareykanka ah ee jira 25 ilaa 34, mushaharka dhexdhexaadka ah waa $ 918 asbuucii ama $ 47,736 sanadkii. Taasi waa boodh weyn oo ka yimid mushaharka dhexdhexaadka ah ee loogu talagalay 20- illaa 24-jirka.
Guud ahaan, dakhligu wuxuu u muuqdaa inuu sare u kici doono 20 -ka iyo 30 -ka marka aad bilowdo inaad jaranjarada kor u kacdo. Sidoo kale, kooxdan waxaa ku jira dad badan oo shahaadooyin xirfadeed ka qaatay dugsiyada qalin -jabiyay, iyagoo sii kordhiyay mushaharka.
Kahor intaadan weydiin su'aasha intee in le'eg ayaan sameynayaa, hubso inaad ogaato qiimahaaga. Qiimahaagu waa qiyaasta suuqa ee adeegyada aad bixiso.
columnfivemedia.com - Lacag intee le'eg ayay tahay inaad sameyso?
Investopedia.com - Maaliyadda Shaqsiga
smartasset.com - Mushaharka Celceliska Da'da ee Maraykanka
17 Fikrado Qurux Badan oo Lagu Bixin Karo Deynta Si ka dhakhso badan sidii hore
Nuqul ka samee Liisaska Kharashyada Billaha ah oo hubso inaad wax badan keydsato (
10 Siyaabood Oo Jaban Oo Lacag Looga Helo Hawlgabka | 2022
Dib -u -eegista Barnaamijyada Shabakadda XYO 2022: Sida ay u Shaqayso | Fadeexad ama Sharci?
Waa Maxay Falsafadda Ugu Wanaagsan Ee Ka Dambeysa Wakhtiga Waa Lacag? Aragtida Khubarada
Ma la socotaa sheekada 'waqtigu waa lacag'? Waxaan kugula talinayaa inaadan waligaa akhriyin safka koowaad…
Xubinimada Costco ee bilaashka ah waxay ku siinaysaa wax ka badan inaad cunto ka soo iibsato bakhaar la jecel yahay. U safraya sida…
Sida Loo Noolaado Shaqo La'aan & Biilasha Bilaa Cadaadiska 2021
Waxay u egtahay kaftan markaad tiraahdo waxaad bixin kartaa biilashaada adigoon shaqo haysan. Kalsooni